Blog လုပ်ချင်တယ် — MYSTERY ZILLION
September 2008 edited February 2009 in Blog
အိမ်မှာ နေမယ်အတူတော့ Blog တစ်ခုလုပ်ထားချင်တယ်ဗျာ ......
အဲဒါဘယ်မှာ တက်ကမလဲ ကျွန်တော်က network ဆိုတော့ HTML တို့..... PHP တို့ဆိုတာ စားကတာလားလို့မေးရမလိုပဲ ....
ဘယ်သင်တန်းတက်ရမလဲဗျာ ... မြန်မြန်နဲ့ကောင်းကောင်းနော် ( package ) ဟုတ်ဘူး ဟီး
package ဆိုရင် သေမလောက်ကြောက်တယ် ...
mzblog.net မှာလုပ်ကြည့်ပါလား ... ကျနော်လည်း အခု အဲဒီမှာစမ်းကြည့်နေတယ် ...
သင်တန်းကတော့ ကိုယ်လိုက်နိုင်လဲ ဒီနှုန်း.. မလိုက်နိုင်လဲ ဒီနှုန်းအတိုင်းသင်မှာပဲ.... ကိုယ်ကလိုက်နိုင်နေရင် အချိန်တွေ နှမျောစရာကောင်းပါတယ်... ရှေ့မရောက်တော့ဘူး...
အစ်ကိုက network ဆိုတော့ web server သဘောတရားတွေ၊ DNS, Mail Exchange, FTP သဘောတရားတွေ နားလည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါ.... စမ်းကြည့်ပါ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်...
MZ blog မှာပဲ အရင်စမ်းလိုက်ပါ.. သင်တန်တက်ချင်ရင်လဲ MZ edu မှာပဲ အရင်စမ်းကြည့်ပါဦး... သူတို့ရဲ့ စေတနာကို တန်ဖိုးထားရာလဲ ရောက်ပါတယ်။ ပါရမီဖြည့်ပေးရာလဲ ရောက်ပါတယ်။
ကဲ.. ဆရာတို့ရေ ကြော်ငြာခ ဘယ်လောက်ပေးမှာလဲဗျာ.... :D:D
edu ရဲ့ course ပြီးအောင်စောင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ နောက်နှစ် အိုလံပစ်မှာဆုံးကြရအောင်နော်။(ဘယ်မှာကျင်းပမယ်ဆိုတာမသိသေးပါ။)
လုပ်ပါနဲ့ဗျာ.....(လိုက်ဖတ်ရမဲ့ blog တစ်ခုတိုးလာမှာစိုးလို့.....:D...:P..)
တစ်ကယ့် blogger တွေလို ကိုယ့် blog ကိုလှလှပပလေးတွေလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့...အချိန်ကုန်မယ်
ထင်တာပဲ...:D.....ပုံမှန်ပဲ လုပ်ချင်တာဆိုရင်တော့...ဒီ ကိုစေတန်ရေးထားတဲ့ blog ဖန်တီး တဲ့ pdf file လေး ရှိတယ်...တစ်ခြား bloggerဂုရုကြီးတွေရေးတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်ထင်တာပဲ.....အဲ့ဒါတွေကိုဖတ်
ပြီးလိုက်လုပ်ကြည့်ပေါ့ဗျာ...မလုပ်တတ်ရင် MZ.edu မှာသင်တန်းတက်လိုက်ဗျာ...သင်တန်းကြေးမပေး
mz blog ကတော့အကောင်းဆုံပါပဲ
u မသုံးတက်သေးတဲ့ သူများအတွက် ရော အခုမှ စလုပ်မယ့် MZ blogger များအတွက်လညး်။
ကျွန်တော် အခု MZ ရဲ့ Learning ကိုစတင်လေ့လာနေပါပြီး .....
အဟုတ်ပဲဗျို.၊ wordpress သင်ခန်းစာမှာ install လုပ်တဲ့ အခန်းနဲ.ပဲ ငုတ်တုပ်မေ့နေလို. wamp ကော wordpress ပါ uninstall လုပ် ပြစ်လိုက်ပြီ။
How to make blogebooks (written in Myanmar)
www.Blogger.com နဲ့ ဘလော့ဂ် ရေးချင်ရင် ...
ညီလင်းဆက် စီစဉ်တဲ့ebook
www.wordpress.com နဲ့ ဘလော့ဂ် ရေးချင်ရင် ...
ရာမည ဖိုးလပြည့် စီစဉ်တဲ့
database name တွေ
MySQL host name တွေဖြည့်တော့မှပဲဒီလိုကြီးပေါ်လာတယ်
အဟီးအကူအညီတွေကြီးလွှတ်တောင်းနေရတယ် ဘာမှလည်းပြန်ပေးနိုင်ဘူး စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ
taryarpwagyi wrote: »
ပုံပိစိလေးဖြစ်နေတယ်၊ ဘာမှ မြင်ရဘူးဗျ။ လင့်ပေးရင်လည်းပေးပါလား။:106:
အဲဒီလိုမျိုး ကျွန်တော်လည်း ဖြစ်ဖူးပါတယ်။ အဲဒီအဆင့်က WP-ဖြည်ချတုနး်က ဖိုင်တွေကို Database ပေါ်မှာ တင်တဲ့အခါ directory လွဲလို့ဖြစ်စေ၊ Data မရောက်သေးရင် ဖြစ်စေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အရင် Database ထဲကို Data ရောက်မရောက် ပြန်ကြည့်ကြည့်ပါ၊ ပြီးရင် directory မှန်/မမှန် ကြည့်ပါ။ ကျွန်တော့်တုန်းကတော့ htdocs အောက်ကို ပို့ရပါတယ်။ MySQL နဲ့ မို့လို့ပါ။ စမ်းကြည့်ပါဦးခင်ဗျ။:39:
စမ်းကြည့်ပါဦးမယ်ဗျာ အဟီးမရတော့လည်း အမ်ဇက်ပြန်ပြေးလာတာပေါ့
uranus.saturn ရေ မှားနေတယ်ထင်လို့ဗျ ကျွန်တော်က ဘလော့လုပ်တဲ့စာအုပ်ထဲကအတိုင်းလုပ်တာ ဒီအဆင့်မှာဖြစ်တာ
17. Database name ကို အဆင့်(8) တွင်မှတ်ထားသော database name ဖြည့်ပါ။ username နှင့် password ကို email
ပို့လာသော email မှ MySQL username နှင့် MySQL password ကိုဖြည့်ပါ။ database host ကို အဆင့်(8) တွင်
မှတ်ထားသော MySQL host name ကိုဖြည့်ပါ။ table prefix မပြောင်းရင်လဲ ရပါတယ်။ ပြီးရင် submit ကိုနှိပ်ပါ။
Domain Name ပြောင်းတဲ့ နည်းလမ်းလေးကိုလည်းသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျား
mz မှာတော့ လုပ်ကြည့်ပြိးပြီ.. မဆိုးပါဘူး လုပ်ရတာလွယ်ပါတယ်...
ဒါပင်မဲ့ စိဘောက် တို့ ဘာ တို ထည့်ချင်တာ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ...:65:
Mz ဘလော့မှာ ပုံ တွေ တင်လို့ အဆင်ပပြေဘူး.. ဘာလိုနေတာလည်းမသိဘူး..
ကျွန်တော်ကတော့ html ကိုတတ်ရင်ကိုယ့် blog က သိပ်မလှပေမဲ့လည်း သူနဲ့ဆို ရင်ဆောက်လို့ရတယ်လို့ထင်ပါတယ်
html ကweb programming languague တွေထဲမှာ အလွယ်ဆုံးနဲ့အခြေခံအကျဆုံးလေဗျာ
php တို့ဘာတို့ ကိုအကိုကျော်တတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော့်အထင်တော့ အကိုရူးသွားနိုင်တယ် :39:လို့ထင်တယ်
html ပြီးရင် css ကိုလေံလာပြီးမှ jscript တို့ php တို့ စတဲ့ အမြင့်စားတွေကို လေ့လာဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်
ကျွန်တော်ဆိုလည်း အဲ့လိုပဲလေ့လာနေတာပါ ခုတော့ css ရောက်ပြီ html တော့ပြီးသွားပြီ:6:
ရာမည ဖိုးလပြည့် ဟာကို ဒေါင်းလို့မရပါ
ရာမညဖိုးလပြည့်စာအုပ်ကို အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါ ...
ပြန်တင်ပေးနိုင်မလားခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်လည်း အခုမှတွေ့လို့ ဒေါင်းကြည့်တာ မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ ကျေးဇူးပါ။